စားကြပါဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စားကြပါဦး
Posted by ေၾကာင္ေလး on Jun 24, 2012 in Copy/Paste, Facebook | 22 comments
သဂျီးရေ ဟို ပို့စ် ကိုဖျက်ပလိုက်ပါတော့။
မန့်ထားသူများ ပွိုင့်လျော့လဲ နဲနဲစီပါဒ
နေ့လည်စာချိန်မို့ ဘာများပါလိမ့်လို့ ဝင်ကြည့်မိပါတယ်….
ဟာ ကိုယ်တို့အတွက် စပါယ်ရှယ်ဟင်းပဲ
ကြောင်မျိုးနွယ်စုများ၏ အစာအား စောင့်ရှောက်ပါမည်။
စားတော ့စားမယ်နောက်မှ….ဒါပေမဲ ့ကြောင်လေးကိုယ်တိုင် ဝါးကျွေးရမယ်ဟေ့
ဟိုဘက် ပို့စ်မှာ စားချင်ကြတယ်ပြောလို့ မျှကျွေးမယ်ပြောတာပါခင်ဗျ။
ညလေးနဲ့ ဂျွန်ဖြိုးရေ…… ဝါးပြီးကျွေးချင်ပါတယ်၊
ဒါပေမဲ့ ဝါးပြီးရင် မျိုချမိရက်သားဖြစ်သွားတယ်။
ကြောင်စာ ကြောင်စားတာကောင်း၏ အနော်လဲပြေးပြီ
သူတို့ တောထဲမှာ သစ်ခုတ်တော့ အနီးအနား ကရင် အဖိုးကြီးအိမ်ကို အလည်ရောက်၊ ထမင်းပွဲနဲ့ ကြုံလည်း ဝင်စားပေါ့
တခါတော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ငါးပိရည်နဲ့ ခါးပိုက်ထဲက တခုပြီးတခု ထုတ် မြှုပ်စားတယ်..။ ဘာလဲလို့မေးတော့ ပြတာ မွေးကင်းစ ကြွက်ပေါက်လေးတွေတဲ့ဗျား…။ သူတို့လည်း ထမင်းဝိုင်းက ထအန်ပြီး နောက် သွားလည်း ထမင်းဝင်မစားတော့ဘူးတဲ့….။
ဒါမျိုးကတော့ လူတွေရဲ့ အချောင်ရချင် ဈေးသက်သာချင် တဲ့ လောဘကို နှိုးဆွပြီး ဈေးရောင်းတဲ့ နည်းပေါ့..
ကျုပ်လိုလူမျိုး မကြာခဏ ခံရတဲ့နည်းပဲ…
ဒါလဲ သိပ် အမှတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး… အခုထိ လစ်ရင်လစ်သလို ခံနေရတုန်း…
ဒါက ဟိုဘက်ပိုစ့်မှာ ရေးတဲ့ကွန်မင့် မှားပြီးဝင်သွားတာ..
ဒီပိုစ့်ကိုရေးတဲ့ ကွန်မင့် ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာ လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်..
လောလောဆယ်တော့ ဆောဒီးပါ စာဖတ်သူတို့…
ရွာစားကျော်ရေ ကြိုက်တဲ့သူများကတော့ မြေမနင်းသားဆိုပြီး စားကြောင်းကြားဖူးပါတယ်ဗျာ။
လူအဖြစ်ကတော့ …..အမငေး … ဟေး…ဟေး။
ကျနော် လေးကျပ်ရလိုပါခင်ဗျ။ ခွစ်….ခွစ်….စ်
တကယ်ပြောတာဒီပုံကြည့်မိပီးရင်ထဲတကယ်ကိုမကောင်းတာပါ မလိမ်ပါဘူး တကယ် ပါတကယ်ကိုရင်ထဲမကောင်းတာ ပါ ထမင်းစားခံနီးကြည့်မိတော့ပိုဆိုးသွားပီ ထမင်းကစထဲကမစားချင်ပါဘူးဆိုမှ ကိုကြောင်ကြီးကအသားပေါသလောက် စိတ်ထားမကောင်းဘူး ကိုကြောင်ကြီးကိုမုန်းတယ်
တကယ်ပြောတာဒီပုံကြည့်မိပီးရင်ထဲတကယ်ကိုမကောင်းတာပါ မလိမ်ပါဘူး တကယ် ပါတကယ်ကိုရင်ထဲမကောင်းတာ ပါ ထမင်းစားခံနီးကြည့်မိတော့ပိုဆိုးသွားပီ ထမင်းကစထဲကမစားချင်ပါဘူးဆိုမှ ကိုကြောင်ကြီးကအသားပေါသလောက် စိတ်ထားမကောင်းဘူး ကိုကြောင်ကြီးကိုမုန်းတယ် ။
ကြောင်ကြီးက စီနီယာ ဆရာပါ
ကြောင်လေးက ဂျူနီယာ တပည့်ပါ။
ကြည့်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြရတဲ့ ရွာသူား အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဟမငေး ဟမငေး ဂယ်ဂျဘာ ဂယ်ဂျဘာ။
အွန် … သူ့ထမင်းပန်ကန် ဓါတ်ပုံရိုက်တင်တာ ထင်ပါရဲ့ …. ။
ကြောင်တွေ အတွက် အထူး menuပဲ ဟိဟိ ထမင်းအစား … သောက်စရာလေးနဲ့ တွဲပေးလိုက်ရမှာ .. တကယ်တမ်းကြောင်တွေက ထမင်းမစားဘူး … ထန်းရည်ပဲ သောက်ကြတယ်
လှတပတလေးတောင် ပြင်ထားလိုက်သေးတယ်…တော်တော်အမြင်ရှိတဲ့ ကြောင်လေးပဲ…
အိမ်က ရွှေဝါကြီးကို သတိရလိုက်တာ…